Ahoana ny fomba hidirana amin'ny maody fanarenana amin'ny marika Android | Androidsis
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha Nanazava izahay hoe inona ny fomba fanarenana amin'ny finday Android. Azonao atao ny mamaky ny momba azy rehetra ity rohy. Noho io maody io dia afaka mamerina ny rafitra fiasan-telefaona finday isika raha sendra misy zavatra mitranga ary nisy ny tsy fahombiazana izay tsy mamela antsika hanomboka azy ara-dalàna. Araka ny efa nolazainay, miovaova arakaraka ny maodely izany.
toy ny ny mpanamboatra rehetra amin'ny Android dia mampiasa fomba iray hidirana amin'ity fomba fanarenana ity. Noho izany, etsy ambany dia holazainay aminao ny fomba hidirana amin'ny marika lehibe amin'ny finday Android.
1 Fomba fanarenana amin'ny BQ
2 Fomba fanarenana amin'ny Motorola / Lenovo
3 Fomba fanarenana amin'ny LG
4 Fomba fanarenana amin'ny Huawei
5 Fomba fanarenana amin'ny Google Pixel sy Nexus
6 Fomba fanarenana amin'ny Samsung
7 Fomba fanarenana amin'ny HTC
8 Fomba fanarenana amin'ny Xiaomi
Fomba fanarenana amin'ny BQ
Ny telefaonan'ny mpanamboatra Espaniola dia mazàna mitondra ny Android Android mitovy amin'ilay hitantsika ao amin'ny Motorola, izay tsy nanova ny kaody Android loatra. Ka ny fomba hanarahana azy dia mazàna mitovy amin'io karazana marika io. Ny dingana tsy maintsy harahintsika amin'ity tranga ity dia:
Vonoy ny telefaoninao
Tazomy miaraka hatrany ny bokotra herinaratra sy fanamafisam-peo
Rehefa mihetsiketsika izy ary aseho ny sary famantarana, hiseho eo amin'ny efijery ny menio fanarenana.
Fomba fanarenana amin'ny Motorola / Lenovo
Ireo dingana amin'ity tranga ity dia mitovy amin'ireo nasehonay anao, na dia tsy maintsy manao zavatra hafa aza izahay raha manana finday Motorola na Lenovo. ireo no dingana tokony harahina:
Tsindrio ny bokotra midina sy ny bokotra herinaratra amin'ny fotoana mitovy mandra-panombohany
Mandrosoa amin'ny alàlan'ny safidy alohan'ny hidirana amin'ny mode Recovery / mode Recovery
Miditra isika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra herinaratra
Android iray no hiseho mandry miaraka amin'ny hafatra tsy misy somandos (toa ilay eo amin'ny sary eo am-piandohana). Tazomy ny bokotra herinaratra ary kitiho ny haavon'ny feo
Fomba fanarenana amin'ny LG
Raha ny telefaonan'ny orinasa koreana dia iray amin'ireo tsotra indrindra izy io azontsika arahana. Ireto ny dingana tsy maintsy ataontsika raha manana telefaona LG isika:
Tsindrio ny bokotra herinaratra ary atsofohy miaraka amin'izay koa
Rehefa miseho ny logo LG dia alefaso vetivety ny bokotra herinaratra
Tsindrio indray ilay fitambarana mitovy mandra-pahatongan'ny famerenanana mafy eo amin'ny efijery
Fomba fanarenana amin'ny Huawei
Raha manana telefaona Huawei ianao, ny dingana tsy maintsy arahinay mba hahafahantsika miditra amin'ny maody fanarenana amin'ny maodelinao, izy ireo dia mitovy amin'ny hafa efa hitantsika hatreto. Ireto misy toy izao:
Tsindrio ny bokotra miakatra sy ny bokotra herinaratra mandra-piveriny indray
Rehefa vita ny booty dia hivoaka ny fomba fanarenana
Ampiasao ny bokotra bokotra hivezivezy ary safidio ny safidy tadiavina amin'ny alàlan'ny bokotra herinaratra
Fomba fanarenana amin'ny Google Pixel sy Nexus
Ny telefaona Google, na ny Pixel na ny Nexus, dia manana rafitra mitovy afaka miditra amin'ity maody ity. Ny dingana tokony harahintsika dia:
Tsindrio ny bokotra herinaratra ary ampidino ny haavon'izy ireo mandra-pihaviny indray
Ny menio bootloader dia hivoaka ary hifindra miaraka amin'ny bokotra volume
Safidio ny maody fanarenana amin'ny alàlan'ny bokotra herinaratra
Rehefa mivoaka ny Android dia tsindrio ny bokotra herinaratra ary raha vao miakatra ny bokotra ambony, dia tazomy ny bokotra hery
Fomba fanarenana amin'ny Samsung
Mikasika ireo telefaona marika koreana, ny rafitra dia tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny hafa izay hitantsika teo amin'ny lisitra. Ny dingana tsy maintsy harahintsika amin'ity tranga ity dia:
Tsindrio ny bokotra herinaratra, trano ary fanamafisam-peo miaraka amin'izay
Hisokatra ny fomba fanarenana
Mifindra mampiasa ny bokotra volume ary misafidiana amin'ny bokotra herinaratra
Fomba fanarenana amin'ny HTC
Ao amin'ny telefaonan'ny marika Taiwanese dia somary tsy mitovy ny dingana hanarahana. Tokony hataontsika izao manaraka izao:
Mandehana any amin'ny toeran'ny telefaona ary avy eo amin'ny batterie ary esory ny boaty Fast boot
Tsindrio ny bokotra herinaratra ary atsofohy miaraka indray ny volanao
Hivoaka ny menio fanarenana
Tsindrio ny safidy tadiavina amin'ny bokotra herinaratra
Fomba fanarenana amin'ny Xiaomi
Amin'ny tranga Xiaomi dia azontsika atao amin'ny telefaona na tsia. Ka miorina amin'io dia tsy mitovy ny dingana. Raha mandeha io dia tsy maintsy ataontsika izao:
Ampidiro ny fampiharana fanavaozana
Tsindrio ireo teboka telo
Misafidiana miverina amin'ny maody fanarenana
Raha maty ny telefaoninao dia tsy maintsy manindry ny feo avo sy ny hery miaraka amin'izay ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Fanarenana Android » Ahoana ny fomba hidirana amin'ny maody fanarenana amin'ny Android
Daniel Munoz dia hoy izy:
Manana takelaka misy marika android 10 hyundai aho fa tsy afaka miditra amin'ny fomba fanarenana amin'ny alàlan'ny safidy misy hevitra, hanana safidy hafa izy ireo amin'ity marika ity
Valiny tamin'i Daniel Munoz